EGO EGO: EGO B THE NA EBERE. - AKWEKWỌ AKWEKWỌ
Ị nọ ebe a: Mbido
EGO EGO: EGO B THE NA EBERE.
Ugbu a bụ oge kacha mma iji tinye ego na Forex Funds. N'ihi na ahịa dị elu jikọtara, ọ dịtụbeghị mkpa ma ọ bụ ihe ịma aka ichepụta iche iche Pọtụfoliyo dị iche iche. Itinye ego na ego ejiri ego Forex ma ọ bụ akaụntụ ego ejiri jikwaa ya nwere ike iwelata mmebi iwu na ahịa zuru ụwa ọnụ na ahịa. Ọzọkwa, ngwaahịa Forex a na-achịkwa nwere ike ịnye mkpụrụ dị oke mkpa mgbe ahịa ndị ọzọ na-agafe ala volatility oge Ọ bụ ezie na volatility nwere ike iweta ihe egwu, ọ nwekwara ike ịmeghe ụgwọ ọrụ dị mkpa.
N'IHI G FN FOR KA EGO EGO? M MAARA OT H M GA-EJI AJ MY M
Ego Forex jikwaa usoro ahịa azụmaahịa.
Dị nnọọ ka a Pọtụfoliyo dị iche iche mejupụtara njiri dị iche iche, atụmatụ, klaasị akụ, yana ụdị itinye ego na ngwa ọrụ dị iche iche, ya mere, pọtụfoliyo Ofesi ga-adị.
Ndị ahịa nwere nnukwu ego ego Forex nwere ike ịnwe ọtụtụ akụkọ, yana usoro dị iche iche dị ka edepụtara n'elu, na mgbakwunye azụmaahịa onwe ha ma na-agba robot azụmaahịa ma ọ bụ akara aka na aka ha.
Akaụntụ Akaụntụ Jikwaa na-apụtakarị na onye na-etinye ego na-enye onye njikwa ego ohere ịzụ ahịa akaụntụ Forex nke onye na-azụ ahịa, nke nwere aha onye na-etinye ego yana ọkacha mma na ụlọ ahịa na-achịkwa. A na-enye ikike ikike ịzụ ahịa na oke ikike nke ọka iwu (POA), nke na-enye ohere ịzụ ahịa (ọ bụghị iwepụ ma ọ bụ nkwụnye ego) site n'aka onye njikwa ego ahụ ruo mgbe a ga-ewepụ ikike dị otú ahụ ma ọ bụ onye na-achụ ego wepụrụ ego.
Ndị na-achụ ego na-achọsi ike na arụmọrụ. Ọrụ a na-atụghị anya ya bụ njirimara kachasị mkpa nke ndekọ ndekọ ndekọ ego nke Forex. Ka e were ya na ndekọ ndekọ ego nke onye na-azụ ahịa ego gbanwere site na arụmọrụ akụkọ ihe mere eme. N'okwu ahụ, ndị na-etinye ego nwere ike iche na usoro azụmaahịa ahụ agbanweela ma ọ bụ na ọ naghịzi arụ ọrụ, nke nwere ike ime ka ndị na-etinye ego gbapụta ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke ego ha. Ndị ọchụnta ego Forex nwere ahụmahụ ghọtara na ogologo oge ndekọ na nlọghachi na-agbanwe agbanwe ruo ọtụtụ afọ abụghị mmesi obi ike nke nsonaazụ na-aga n'ihu na uru n'ọdịnihu; N'ihi ya, ndị na-achụ ego ga-agbaso ọrụ ndị ahịa ha ma jiri ya tụnyere nsonaazụ akụkọ. Tụleghachi arụmọrụ akụkọ ihe mere eme na nloghachi oge kwesịrị ịbụ akụkụ nke akụ na ụba ọ bụla ịdị uchu iji nyocha usoro.
NA-EME mkpebi siri ike
Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche dị iche iche, ma ọnụ ọgụgụ na ikike, nke ga-adị mkpa maka onye na-achụ ego ka ọ nyochaa onye nwere ike mepee akaụntụ Forex jikwaa ma ọ bụ tinye ego na oke ego na-azụ ahịa ego.
Onye na-etinye ego nwere ike ịgbasa site na ịmepụta pọtụfoliyo Forex buru ibu ma ọ bụ ịmepụta pọtụfoliyo ọtụtụ akụ ebe ego Forex ga-abụ otu n'ime mgbasa ozi Foreign Exchange. Ejikwa Forex ekwesịghị ịbụ onye na-ajụ maka ego ego ọ bụla. Nke a kwesịrị ịbụ eziokwu n'agbanyeghị agbanyeghị dollar ma ọ bụ ego ole nwere na Assets Under Management (AUM). Kama nke ahụ, ọ kwesịrị ịnọchite anya pasent nke njigide nke onye na-etinye ego na-ekenye ka ọ gbasaa mgbe ọ na-atụle uru / ihe egwu dị.
Akaụntụ oghere na ego a Forex ego akaụntụ. G'SN NE B NE N'NELỌ? GN KA M GA-atụ anya na ego?
Imirikiti ndị na-ere ahịa ntanetị na-arụ ọrụ n'ịntanetị na-arụ ọrụ na usoro ndị a na-achịkwa na-enye nyiwe na ọrụ ọfịs maka ndị ọrụ njikwa ego FX na ndị ahịa ha. Agbanyeghị, ọ bụghị ego ego niile dị na azụmaahịa niile. Nke a bụ ihe atụ atụ: ABC Forex Fund nwere ike naanị ikpochapụ ahịa ha site na Big Forex Broker, mana ọ bụghị site na Best Forex Broker; N'ihi ya, onye ahịa nke chọrọ ịme akaụntụ na ABC Forex Fund ga-emepe akaụntụ na Big Forex Broker iji nweta njikwa ego ahụ.
Ozugbo ahọpụtara onye na-ere ahịa Forex, a ga-emepe ego ahụ wee nweta ego. Ọzọ, ngosi akwụkwọ a ga-enyocha ma banye n'aka ndị na-etinye ego na ya. Achọghị ka ikike ọka iwu (LPOA) bịanyere aka site n'aka ndị na-etinye ego iji nye ikike njikwa azụmaahịa Forex ikike ịzụ ahịa akaụntụ ahụ. Onye oru ntinye ego kwesiri inwe ugbu a inweta ezigbo okwu na ihe nfu na akuko nile nke ubochi.
Na-eso Ego Forex Mgbe Emechara Investment.
The itinye ego maka ego nwere ike ịgụnye kwa ụbọchị, kwa izu, kwa ọnwa, ma ọ bụ kwa afọ. N'ihi ya, a ga-enyocha ọrụ arụmọrụ kwa oge iji chọpụta ma arụmọrụ ọ dabara na atụmanya mbụ nke ndị ọchụnta ego. Nke a bụ usoro nzaghachi dị oke egwu maka ndị na-etinye ego maka ịkọ ma ọ bụrụ na itinye ego na-enwe ijeụkwụ na atụmanya mbụ.
Ọ bụrụ na arụmọrụ nke ego ahụ anaghị agbaso usoro ndekọ akụkọ ihe mere eme ya ma ọ bụ nke atụghị anya ya, onye na-etinye ego kwesịrị ịkpọtụrụ onye njikwa ego iji jụọ ihe kpatara enwere mgbanwe na arụmọrụ. Enwere ike ime ihe kpatara na akụkọ ihe mere eme anaghịzi adaba na nlọghachị ugbu a gụnyere ịrị elu volatility na ahịa ma ọ bụ ihe omume geopolitical na-atụghị anya ya. Ọ bụrụ na ndị na-etinye ego na-enweghị afọ ojuju na nkọwa njikwa ego nke njikwa banyere arụmọrụ, onye na-etinye ego kwesịrị ịtụle ibelata ego ya ma ọ bụ dọpụta ego ya kpamkpam na ego Forex.
AKWOSKWỌ AKW .KWỌ
Ego zuru oke na-enye ohere… [GỤKWUO...]